Sünger Yüklü Tır Yandı - RayHaber
Homeရထားလမ်းကိုမီးရှို့မြှုပ် Installed TR
06 / 03 / 2013 Levent Ozen ရထားလမ်း, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း 0
လမျးခရီး loaded ရေမြှုပ်မီးလောင်လွယ် t ကိုရွေ့လျား Yalova Izmit မီးရှို့ကြ၏။
ရေမြှုပ် Genghis Akbas (59) နဲ့အစ္စတန်ဘူလ်မှ Bursa မှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ 25 598 ln တစ်ဦးသေးမသိသောအကြောင်းပြချက်အနီး TIR ပန်းကန်Çiftlikköyခရိုင် flatbed ဦးဆောင်, မီးမရှို့စပြုလာသည်။ မီးတောက်မကြာမီတစ်ခုလုံးကိုမော်တော်ယာဉ်လွှမ်းလေ၏။
ယာဉ်မောင်းမီးလောင်လွယ် Akbas သဘောပေါက်တဲ့သူ Dors, ယာဉ်လမ်းဘေးဆွဲသည့်မီးသတ်သမားကိုပြောသည်။ ထရပ်ကားÇiftlikköyမီးရှို့ကျောက်ခေတ်တံတားနှင့် Yalova မီးသတ်သမားကြားဝင်။
tailbacks ၏ကီလိုမီတာဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင့်နာရီဝက်မီးလမ်းမှအသွားအလာမှအပိတ်ခံခဲ့ရသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုဖြစ်စေတဲ့, မီး extinguishing ပြီးနောက်လမ်းအသွားအလာမှပြန်လည်ဖွင့်လှစ်။ TIR, လမ်းပေါ်ရှိအခြားမော်တော်ယာဉ်များယာဉ်မောင်းသတိပေးနေသော်လည်းစွပ်စွဲ3အကြောင်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်လမ်းထကီလိုမီတာ။
တင်လမ်းအသွားအလာမတော်တဆမှု LPG ရေနံတင်သင်္ဘောများတွင်အဓိကချို့ယွင်းချက် 24 / 09 / 2014 LPG ရေနံတင်သင်္ဘောလမ်းမတော်တဆမှုအတွက်အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက် loaded: မှောက် LPG ရေနံတင်သင်္ဘော၏မြို့မှာခွငျကောငျပေါကျကှဲမှု 34 လူများမတော်တဆမှုကျွမ်းကျင်သူအစီရင်ခံစာတွင် 36 လူတွေဒဏ်ရာရ, သူတို့ရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးပြီးစီးခဲ့ပါသည် loaded ။ အစီရင်ခံစာထဲမှာ, မတော်တဆထိခိုက်မှုအဝေးပြေး9။ ခရိုင်ရုံး၏ 20 ရာခိုင်နှုန်း, မတော်တဆမှုမှအနီးဆုံးအမှတ်အတွက်တပ်ဖွဲ့များ 18 ရာခိုင်နှုန်း, ဒါ 15 မစုံလငျမှတ်ချက်ချခဲ့၏နှစ်ခုဘတ်စ်ကားကုမ္ပဏီများအခွငျကောငျမှောက် LPG ရေနံတင်သင်္ဘောပေါက်ကွဲမှုမတော်တဆထိခိုက်မှုအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် loaded ခဲ့ရေနံတင်သင်္ဘောဒရိုင်ဘာအားဖြင့်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးအစီရင်ခံစာ, အဝေးပြေး9ပြင်ဆင်ကြ၏။ နှစ်ခုရေနံတင်သင်္ဘောမောင်းသူနှင့်အတူအနီးဆုံးအမှတ်ဖို့ခရိုင်ရုံး, မတော်တဆမှုအတွက်တပ်ဖွဲ့များ 20 ရာခိုင်နှုန်း 18 ရာခိုင်နှုန်း, ...
စိတ်လှုပ်ရှားမှုတရားစွဲဆိုရထား 23 / 09 / 2012 ငါမသိရပါဘူး, တတ်၏အဘယ်သူသည် ... ထိုနေ့၏အချို့သောအချိန်များတွင်အသံနားထောင်ကြလော့။ သို့မဟုတ်တခါတရံတွင်ကကြာပါတယ်။ ဝေးလံခေါင်သီ ... နက်ရှိုင်းစွာ ... ဒါပေမဲ့ဒီရထား၏ "နှလုံး" ဟုအျောဟစျသံတူနေတယ်။ ဝေး, နက်ရှိုင်းသော ... ဒါပေမယ့်သူကအမြဲလတ်ဆတ်ဆိုက်ရောက်နှင့်ထွက်ခွာငါ့ကိုမှလတ်ဆတ်ဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုသည်။ ရထားထွက်ခွာသွား၏ဝမ်းနည်းမှုကိုပြောတယ်, ကားများတင်ဆောင်လာသောအဆိုပါအော်ဟစ်ခြင်းနှင့်အော်ဟစ် ... အပြန်လည်ဆုံဆည်းခံစားမှုလှည်းရထား; ! လူ့မဟုတ် .. အဆိုပါရထားတစ်ဇစ်ကဲ့သို့တူညီသောလမ်းကြောင်းအပေါ်အစဉ်အမြဲပါ၏ "ဒီရထားဝင်, သင်သည်ငါ့ကိုကွားနိုငျ .. ?" ကျနော်တို့အတူတူနားထောင်: ငါအချိန်ကိုနောက်ကွယ်မှ (ကသလိုပဲ) ဖွင့်လှစ် * ... အသံတစ်သံပေမယ့်မပြောက်တက်နားထောင်ကြလော့။ ထို့နောက်အသက်ပြင်းပြင်းရှူဝယ်ယူအလားတူမိန့်ခွန်း, တိတ်ဆိတ်ဖြစ်စေတဲ့အရာကိုမသိ: "ရထား; လာမယ့်! .. "ကျွန်မကဆိုသည်။ တဆင့်သွားသွားရထား ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အလှည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူတပ်ဆင်ကွန်ကရစ်ပာတည်းဟူသောဒေါင်းလုတ်ဆွဲ 22 / 04 / 2013 TCDD ညွှန်ကြားမှုပင်လှည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းန်ဆောင်မှုတင်ဒါကမ်းလှမ်းချက် SUBJECT ကိုအောင်နှင့်ဆက်စပ်အပိုဒ် 5- စီးပွားရေးပိုင်ရှင်ပြန်ကြားရေးအုပ်ချုပ်ရေး 1 အရေးကြီးဝယ်ယူတပ်ဆင်ကွန်ကရစ်ပာ၏ဒေါင်းလုပ်xnumx.bölg။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အုပ်ချုပ်ရေး; က) အမည်: tcdd.xnumx.bölgညွှန်ကြားမှုခ) လိပ်စာ: ဘူတာလမ်း TCDD xnumx.bölgညွှန်ကြားမှု 1.1 / MALATYA ဂ) တယ်လီဖုန်းနံပါတ်:55 44080 /0ဃ) ဖက်စ်နံပါတ်: 422 2124800 4118 င) E-mail ကိုလိပ်စာ: xnumxbolgemalz ဂိမ်း @ tcdd.gov.t f) အမည်နှင့်အမညျ / ခေါင်းစဉ်၏သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ: Avni နှင့်ဓနသဟာယလမ်းညွှန်ကြားမှု။ (Tel: 0) 422 ။ လေလံအထက်ပါလိပ်စာနှင့်နံပါတ်များမှာတာဝန်ခံအတွက်ဝန်ထမ်းများဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်တင်ဒါခေါ်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ရယူနိုငျသညျ။ ...
အင်ဒိုနီးရှား LPG ခုနှစ်တွင်ရေနံတင်သင်္ဘောတင်ဆောင်ခရီးသည်ရထားသေလွန်သောသူတို့သည် (ဗီဒီယို) ရှိကြ၏2သို့ဆော 09 / 12 / 2013 အင်ဒိုနီးရှားရှိခရီးသည်ရထားပေါ်တွင်တင်ဆောင် LPG ရေနံတင်သင်္ဘော2သေပြီဆောနေကြသည်: အင်ဒိုနီးရှား loaded သည့် LPG ရေနံတင်သင်္ဘောများတွင်ခရီးသည်ရထားဝင်တိုက်ခဲ့2သေပြီဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါသေဆုံးသူမြင့်တက်ရန်မျှော်လင့်နေသည်။ အနည်းဆုံးအား2လူတွေ၏ရလဒ်အဖြစ်ထိတ်လန့်အတွက်အင်ဒိုနီးရှားမြို့တော်ဂျကာတာ (LPG) တင့်ကားအတွင်းခရီးသည်ရထား၏အရည်ရေနံဓာတ်ငွေ့တောင်ဘက်၏မြို့တော်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောမတော်တဆထိခိုက်မှုသေဆုံးခဲ့သူရထားaçıkladı.kazပြီးနောက်အင်ဂျင်နီယာသည်တဦးတည်းမှ KAI ခရီးသည်ရထားကုမ္ပဏီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်အီဗန် Chairunis bildirildi.pt ကွယ်လွန်သွား နေဆဲကြောင့်ဆက်လက် Chairunis ၏ကြီးမြတ်အခက်အခဲဆက်လက်မလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်ရှာဖွေရေးနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးအလုပ်ကိုသူတို့ရဲ့မီးလောင်မှုဖျောသူကသေလွန်သောသူတို့သည်၏တိုးပွားလာစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ဟုဆိုသည်။
Bursa YHT ဘူတာရုံအပေါ်ဆွေးနွေးမှုများအပြည့်အဝလွှဲများတွင်ဆက်လက်
တင်လမ်းအသွားအလာမတော်တဆမှု LPG ရေနံတင်သင်္ဘောများတွင်အဓိကချို့ယွင်းချက်
စက်ခေါင်းသံလွင်ဝန်ကိုထမ်းရွက်ထရပ်ကား 1 သေပြီသို့ဆော
ရွှေရထား loaded ဒဏ္ဍာရီ၌တွေ့